Desambra 19, 2009 amin'ny tolotra 7 Comments
Nandritra miasa amin'ny endri-javatra vaovao ho an'ny transposh, efa lavo amin 'ny olana izay afaka manamboatra. Ny olana dia hoe maro bots mitily ity tranokala ity pejy scanned ny parameter “replytocom” izay tena tsy misy ilàna azy. Toa – tsy misy ilàna azy io parameter no nahatonga ny 2GB ny fifamoivoizana noho izany toerana any amin'ny farany 9 volana.
Efa naka ny fahafahana mba hanesorana andalana vitsivitsy ny mari-pamantarana sy mamorona ny plugin izay fanamboarana ity. Ary hita ao amin'ny ny WordPress Plugin Directory.
Ny kely tsikera mavaivay momba ny WordPress toerana, satria ny fifidianana ho an'ny Plugins no tsy fantatra anarana, ny plugin dia nifidy nidina ny olona, izay tsy fomba HAHAFANTATRA AZY (na izy) dia. Tsy amin'ny antony rehetra mahita (Sady koa anie, maimaim-poana plugin, mba hamaha ny olana manokana, tsy misy fikasany, izay fotsiny miasa). Raha izahay hametraka ny tànany taminy…. 🙂
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: replytocom, WordPress plugin